दुई महिनामा प्रियंकाले घटाइन् २३ केजी तौल - Purwanchal Daily
उनले डा. दिलजान मन्सुर (कर्ट) को क्लास लिएपछि आफ्नो जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको पनि भिडियोमा उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘मानिसका लागि खानाको सन्तुलन हुन आवश्यक पर्छ । जिम गरेर मात्र हामी स्वास्थ्य हुने होइन, खानामा अनुशासित हुन सकेनौं भने स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । म केही महिनादेखि डा. कर्टको सल्लाह बमोजिम नै चलेको छु ।’
विवाहपछि अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले फिल्ममा काम गरेकी छैनन् । फिल्ममा फर्किन उनलाई तौलले पनि अवरोध गरेको देखिन्छ । अब उनी आफ्नो तौललाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर अभिनयलाई निरन्तरता दिने सोचमा छिन् । मंगलवारदेखि उनी टेलिभिजन सिरियल ‘साहु बा’को छायांकनमा व्यस्त छिन् । उनी अभिनीत फिल्म ‘लक्का जवान’ गत बैशाख २३ गते प्रदर्शन भएको थियो ।-फिल्मीखबर
Previous articleट्याक्टरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
Next article१० महिनामा एकसय ५० मुद्धा दर्ता : रोकिएन महिला हिंसाका घटना